Bash: Ahoana ny fomba hananganana script azo ampiharina | Avy amin'ny Linux
Bash: Ahoana ny fomba hananganana script azo tanterahina
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | GNU / Linux, fandaharana, soso-kevitra, Tutorials / Manuals / Tips
Tiako tsikelikely ny mametraka lahatsoratra BashIzaho dia manana fitaovana ampy hampianarana anao tsikelikely torohevitra, hanao script ary maro hafa, mba ho mandeha ho azy ny asantsika isan'andro, mazava ho azy fa hamonjy fotoana be dia be isika
Ary hasehoko anao ny fototra, izay mila ho fantatrao foana, ary izany dia hanampy ahy amin'ny sisa amin'ny lesona 😉
1 Ahoana ny fomba hananganana script .sh?
2 Ahoana no mihazakazaka na mizaha toetra script .sh?
Ahoana ny fomba hananganana script .sh?
Tsotra ... tsotra be 😀
1. Sokafy terminal, ao no soraty izao manaraka izao ary tsindrio [Ampidiro]:
Ho ampy izany hamoronana rakitra ho azy ireo script.sh ao amin'ny fampirimana manokana.
2. Ao amin'ny terminal no apetraho izao manaraka izao:
3. Vonona, vonona ny scripto 😀
Raha manokatra azy isika dia hanana zavatra toy izao:
Aorian'io andalana faharoa io dia soratana avy eo ny torolàlana.
Ohatra, hiteny aminao izahay hampiseho anay amin'ny terminal «<° Linux no tsara indrindra»😀
Toy izao no ananantsika ny script:
Ahoana no mihazakazaka na mizaha toetra script .sh?
1. Tsy maintsy mandeha any amin'ny folder misy ilay script isika, ao amin'ilay ohatra teo aloha dia ny fisie folder -ntsika manokana, ka manokatra terminal isika, ao no soratantsika ny manaraka ary tsindrio [Ampidiro]:
2. Ankehitriny isika dia manatanteraka azy amin'ny alàlan'ny fametrahana teboka sy tsipika (arahana), ary arahin'ny anaran'ny script, dia:
Ary ny bingo, efa ananantsika io 😀
Ataovy izany dia hahita ianao ...
Ankehitriny antsipiriany iray manan-danja, amin'ny farany dia tokony hametraka foana izy ireo «Fivoahana«
Ary ankehitriny, tsy misy zavatra hafa ampiana intsony, miandry fotsiny ireo fampianarana ho avy, eto no hianaranao bash HAHA.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Bash: Ahoana ny fomba hananganana script azo tanterahina
Misaotra namana, nahaliana ahy foana ny fomba fanaovana script.sh, tonga izao ny fotoana ianarana, miandry ny fampianarana manaraka aho.
Nah, fahafinaretana hehe 😀
Ho hitanao ... tsikelikely aho hametraka fampianarana Bash, hijerena raha misy olona mientanentana, mianatra ary mihatsara daholo isika HAHA.
Salama, mila ny fanampianao aho raha afaka manampy ahy amin'ny sora-baiko niraikitrao ary mila ataoko amin'ny lohahevitra iray, tiako ny mifandray amiko.
volontany dia hoy izy:
Ah mety !! mahafinaritra 😉
Mamaly an'i pardo
Aza adino fa horaisina tsara foana ny taraina na ny tolo-kevitra 😉
Tiako ilay lahatsoratra, isaky ny mila lohatenin-dahatsoratra aho dia mandeha amin'ny fitetezana fotsiny hahitako ny andalana: "#! / Bin / bash" ao amin'ny lohateny (tena manadino aho). Amin'ity fandraisana anjara ity dia azoko atao ny manana an-tsoratra azy io ary mandika sy mametaka fotsiny 😀
Tadidio fa / bash sy / sh… tsy mitovy io, nandany 2 andro aho niady tamin'ny script izay tsy mety amiko araka ny tokony ho izy, ary satria napetrako izy fa tsy bash 😀
Izay fanontaniana apetrakao aminay.
xfraniux dia hoy izy:
Jaajajajajaja ary ity no tsotra indrindra, azonao atao ihany koa ny manokatra gedit na mpamoaka lahatsoratra rehetra ary mandika:
Ary nomenay alàlana hamono izany….
data tena tsara .. arahaba
Mamaly an'i xfraniux
hehe yeah, mety ho vita toy izao izany, saingy tsy haiko ... nieritreritra aho fa ho tsotra kokoa ny manao kopia / apetaka tsipika roa (izay mety ho iray raha ny tena izy) ary dia izay, vonona ny script miaraka amin'ny alalana fanatanterahana sy ny lohateny 😀
Bertholdous dia hoy izy:
Salama. Tokony hotehirizina foana toy ny rakitra .sh ve ny script?
Ao amin'ny windows dia toy izany koa ny rakitra .bat. Ary raha ny amin'ny asa soratr'izy ireo dia somary tsotra kokoa izy ireo.
Valiny tamin'i Bertholdous
Che tena tsara
Manantena ny lahatsoratra manaraka aho ary amin'ny fanoratana kely fotsiny.
Misy sosokevitra, script tianao hataoko sa zavatra hafa? 😀
Io ve ilay tsy mahay mandahatra? Na dia mora aza dia fandaharana
HAHAHA tongava ... faly ve ianao? … Ianaro kely ny Bash, ho hitanao ny hatsarany, tsy mila mahay manao programa ianao, manalavitra azy 😀
Inona no lazainao?
Hanao aho, anio tsy ho an'izay aho
Raha ny tena izy, raha toa ka noforonina tsy tapaka ny script, ny asa dia mety ho mandeha ho azy amin'ny script toa ity manaraka ity (adika amin'ny $ home / bin / fotsiny no omena alalana famonoana)
Amin'izany fomba izany, raha mihazakazaka ianao script vaovao tsy misy masontsivana, mamorona $ home / script.sh, fa raha mandeha script vaovao script hafa, mamorona ./otherscript
Ramses dia hoy izy:
Salama namana, tiako ho fantatra ny fomba ahafahako mamorona autorun ho an'ny sdcard ary hovakin'ny findaiko amin'ny android izany ary rehefa novonoina dia manomboka abd.exe miampy ny baiko bugreport> bugreport.txt
Valiny tamin'i Ramses
Tsy misy hevitra namana ... tsy mbola nampiasa Android aho.
Misaotra Gaara, te-hahita toerana iray ahafahako mampianatra script sasany, mieritreritra aho fa tamin'ny mailaka no nolazaiko izany taminao, izay tena mila ianarako. Nanaraka ireo dingana nataonao antsipiriany aho ary tonga lafatra ny zava-drehetra saingy tsy mandeha izany, azoko ity:
./script.sh: andalana 5: EOF tsy ampoizina eo am-pitadiavana fampifanarahana `» '
./script.sh: andalana 9: hadisoana syntactic: tsy nampoizina ny faran'ny fisie
Azavao amiko izay atao hoe fahadisoako
Ny hadisoako, WordPress dia manova antsipiriany sasany, jereo indray ny kaody ao amin'ny paositra ary apetraho toy izao ao amin'ny script-nao.
Ny mitranga dia izao:
Tsy mitovy amin'ny:
Tsy azoko fa mbola hitako ihany. Aiza ny fanovana? Azonao hazavaina tsara ve aho? Ankehitriny rehefa omenao hanatanterahana azy ity dia vokatra ity:
./script.sh: andalana 5: °: Tsy misy ilay rakitra na lahatahiry
Ampitao amiko ny script izay ataonao, apetraho eto ny kaody: http://paste.desdelinux.net
Jereo indray ilay paositra fa hadinoko ny nanindry ny bokotra Vaovao farany 😀
Holazaiko aminao fa nijery ilay script conkyrc nataonao ho an'ny conky 2010 anao aho ary marina, marina, ny tandindona kapila dia loharano iray antsoina hoe Poky fa tsy tonga amin'ny defaultOffice ao amin'ny Ubuntu 12.04, mety tsara, raha manana an'ity loharanom-baovao ity ianao dia lazao amiko hoe aiza no ahazoako misintona azy avy (zavatra somary sarotra, tena izy), zavatra iray izay tsapako fa rehefa apetraka ny litera an'ireto tandindona ireto ary tsy misy ny endritsoratra ao amin'ny rafitra, avy eo mametraka ny litera fa tsy ny tandindona, lojika izany, efa mahazo hevitra momba ny fomba fiasan'ny zava-drehetra aho, saingy mila olona manazava zavatra amiko aho mba hahatakarany tsara kokoa, ny zavatra ataoko rehetra dia amin'ny fanapahana ary mbola tsy nanome fandaharana mihitsy aho, tsy ny siansa informatika no nianarako Ary koa, fotoana hafa, manao computing ho fialamboly aho ary ny zavatra tsara dia miasa amin'ny iray amin'ireo rantsany aho, izay nianarako rehetra dia efa nampianarina tena aho, ka ny fahalianako amin'ny olona izay, na kely aza, dia mitarika ahy. ity koa ny script an'ny conky-ko ary hanazava izay tsy azoko aho:
Jereo, rehefa manandrana mampiditra HDD hafa aho dia mahazo an'io ihany satria manome ny sandan'ny mari-pana io. Tsy azoko ireo toetran'ny CPU ao amin'ilay rafitra, mivoaka amin'ny endriny (NULL) izy, rehefa manandrana mampiditra ny kalandrie napetrakao ao amin'ny Conky izay tanias tamin'ny 2010 no tsy nandamina sy nanitatra ny baran'ny conky. Jereo ny fanatsarana rehetra azonao atao. Tiako izany amin'ny sakany ananako ary mampifanaraka an'io sakany io ny kalandrianao ary mivoaka daholo izay nolazaiko taminao fa tsy miseho, izao no mandeha:
–Atao ao anaty paty ny kaody, ka tsy dia be dia be ny fanehoan-kevitra–
ny marina dia mampalahelo ny fandraisan'anjaranao
Valiny amin'i GONZALO
Salama, nanamora ny fiainako ianao tamin'ity script ity. Misaotra betsaka fa tiako ho fantatra raha afaka mandefa mailaka amiko ianao izay ilazalazanao izany satria izaho nevo amin'ny programa.
Aleo aho tsy afaka namariparitra / manazava ireo tsipika kaody ireo, inona no tsy azonao momba ny manazava amin'ny fomba hafa?
Toy izany koa, raha manana fisalasalana ianao dia afaka manontany foana ao amin'ny forum: forum.desdelinux.net
Fandraisana anjara tsara fa azonao atao ny mamorona azy ... Mila script ho an'ny sai aho. Izany hoe, rehefa tsapan'i Sai fa mitondra batterie izy ary manana 20 minitra hamonoana azy dia mandefa signal amin'ny fitaovana iray izy ary tokony hamono ilay script hamonoana mpizara sasany. Tsy haiko raha nanazava tsara ny momba ahy aho ... Valdria miaraka amin'ny fametrahana ny script «fanakatonana -h» ??
Misy zavatra hafa tokony ampiana ao anaty fampirimako modely: B
edwar dia hoy izy:
Misy olona afaka manampy ahy ve mila script ho an'ny ubuntu izay raha manidy ny chrome browser isika dia sokafy indray
Mamaly an'i edwar
Mila script aho izay amin'ny fanatanterahana azy fotsiny dia hanoratra ny mombamomba ny fisie amin'ny lahatsoratra hafa, misy mahalala ve izany?
Efa hitako io ambony io hoy izy ireo ny fomba hanaovana izany
Tena tsara, tena tsara ho an'ny zafikeliko.
Misaotra arivo. »Tahaka ny hanananao tanora maro, fanaovana ho mpampianatra…. Mahafinaritra be izany.
PC PC dia hoy izy:
Tsotra sy miasa, araka ny tokony ho izy.
Valio amin'i Román PC
Hernan Jaramillo dia hoy izy:
Misaotra anao nanampy. Nahasoa, fanazavana tena tsara.
Valiny tamin'i Hernán Jaramillo
Vicene dia hoy izy:
Misaotra anao nanompo ahy. mahafaly
Valiny tamin'i Vicene
Gamerz dia hoy izy:
Tsotra sy mahomby. Fampianarana tsara ho an'ny vao teraka 🙂
Mamaly an'i Gamerz
Salama, tena kely fotsiny no fantatro momba ny script ary tsy haiko raha mifangaro hevitra aho fa izay ezahako atao dia ato amin'ity pejy manaraka ity:
Ny tiana hambara dia tsy dia azoko tsara ny fomba hanombohana an'ity kaody ity na raha manolo ny IPTABLES ity. Ary raha manolo azy araka ny tokony izy izy dia manomboka ho azy miaraka amin'ny OS.
Gaara mahatsiravina !!!
Nanomboka nanao ny enti-mody aho araka ny fanazavanao ary nandaitra !! Misaotra anao nandany fotoana sy nizara ny fahalalanao hivoahana amin'ny maizina amin'ireo tsy mahalala.
Salama, manana fanontaniana aho hananganana script noforonin'ny mpampiasa, afaka manampy ahy ve ianao?
salama manana fanontaniana amin'ny fisie .sh aho
manana fomba ve ianao amin'izany
Nifandray taminao aho mba hahitako raha tsara ny ataoko?
mampakatra -o miverina, rw /
mount -o miverina, ro /
, Tanterahiko amin'ny tanana amin'ny terminal ilay izy ary raha mandeha izy, fa rehefa tiako ny hihazakazaka ilay rakitra dia tsy te.
Mamaly an'i giovani
Nahita an'ity tao amin'ny vivaolinux.com.br aho, tsara izany
Miorina amin'ny Gera.sh - Gera cabeçalho ho an'ny script
Mpanoratra: Sandro Marcell P. Barbosa (Boa Vista - Roraima)
Ohatra fampiasana: script_name my_script
Azonao atao koa ny manondro ny fanitarana, ny fanarahana na ny mpandika teny.
Ex .: backup nome_script ho an'ny mpandika teny 'sh'
na nome_script backup.tcl ho an'ny mpandika teny 'tcl' ary koa ho an'ny andro!
Famaritana ny mpandika teny azonao atao (soloina mpisolo toerana iray hafa!):
Votoatin'ny lohateny (ovao araka izay itiavanao azy!):
CREATOR = »## Nosoratan'i:»
Manamarina raha nanondro ny anaran'ny script ny mpampiasa:
raha [$ # -eq 0]; dia
akony ">>> Fampiasana: $ (basename $ 0)"
raha [$ # -ge 2]; dia
akony "Tsy mety ny anarana misy habaka!"
Azon'ny mpampiasa atao ve ny manoratra amin'ny lahatahiry ankehitriny?
raha [! -w $ PWD]; dia
echo "Tsy mahazo alalana hanoratra ny lahatahiry ankehitriny!"
Ahoana raha misy script hafa manana anarana mitovy ao amin'ny lahatahiry ankehitriny?
akora "Efa misy script miaraka amin'ity anarana ity ao amin'ity lahatahiry ity!"
saka << FARANY
Manampia baiko amin'ny tsipika manaraka =)
Daty famoronana an'ity script ity: $ (daty «+% a% d /% m /% Y») amin'ny $ (daty «+% T»)
Mametraka alalana hanatanterahana:
akony "Script $ 1 noforonina ary avela hanatanteraka!"
Daty famoronana an'ity script ity: 29/01/2013 19:45:00
Debianistrowler dia hoy izy:
Tsara, mandeha tsara !!!
Mamaly an'i Debianistrowler
Fampianarana tena tsara, tsotra ary nanampy betsaka ahy izany, misaotra
Calichi dia hoy izy:
Ry KZKG malala-baovao aho, saingy liana te hianatra.
Manana scrip hafa ianao. Na tampoka eo amin'ny toerana iasako dia te hanokatra iray izay voangona aho ary tsy hitako.
Valiny tamin'i Calichi
Mila fanampiana amin'ny script aho. Atambatra izany.
cool9 dia hoy izy:
Azoko tsara ilay bash, fa raha te hanao alias automatique aho dia tsy hivoaka
Valiny amin'ny cool9
angiesarita dia hoy izy:
Misaotra betsaka amin'ny namanao fanampiana.
Te hahafantatra aho raha afaka manao soa be dia be amiko ianao, mila mamorona script manampy ahy hamorona .sum amin'ny fotoana iray aho fa tsy haiko ny manamboatra azy io. Azonao atao ny manampy ahy amin'ny tondro vitsivitsy. Misaotra ary hitandrina aho raha afaka manampy ahy ianao.
Mamaly an'i angiesarita
Salama, rahampitso tolak'andro, jereo fa manao asa amin'ny lex aho, ka tiako raha azonao atao ny manampy ahy amin'ny Script, izay ahafahako mitantana ilay rakitra lex, ilay iray izay mamokatra lex (lex.yy.c) sy ny rakitra fampidirana data .
Wilmer Ron dia hoy izy:
rano misaotra dokotra !!! Vaovao aho amin'ny script misaotra betsaka anao miarahaba anao aho fa hiambina miaraka amin'ny fampianarana vaovao anao aho !!!!
Valiny tamin'i Wilmer Ron
Karen vega dia hoy izy:
Misaotra betsaka noho ny fandraisan'anjaranareo, manomboka miditra amin'ny unix aho ary mahalana no misy manazava an'izao rehetra izao ny kaody amin'ny fomba tsotra. Te-hanontany anao aho raha afaka manao script izay manampy ahy hahita rakitra maro izay miaina amin'ny làlana iray ihany, miaraka amin'ny fandefasana azy ireo amina fampirimana hafa ... nisy nilaza tamiko fa afaka mitahiry amin'ny txt ny lalana sy ny anaran'ny ny fisie ahy, saingy tsy mazava amiko ny fomba anaovana azy. Mihaino tsara foana aho.
Valiny tamin'i Karen Vega
Eibar Amaya dia hoy izy:
Salama manana VPS aho fa mila fanampiana amin'ny zavatra sasany orita ny tenako dia liana amin'ny fomba hamoronana script na zavatra iray aho mba ahafahako mihazakazaka backup ny zava-drehetra ao anaty folder / root ahy ary mihodina isaky ny adiny 1 ny backup raha toa aho ka azonao atao ve ny manampy amin'izany fa hankasitraka anao be loatra aho amin'izany
Avelako ho anao ny facebook-ko raha te hanampy ahy ianao dia mila fanampiana be dia be 🙂
Valiny tamin'i Eibar Amaya
Jorge Rodriguez dia hoy izy:
mamorona ahy iray handinihana sy hanara-maso ireo fitaovan'ny tambajotra sasany ao amin'ny orinasa
fa nataoko tsotra
hikasika mena.sh && chmod + x mena.sh
nandroaka '# -- ENCODING: UTF-8 -- '>> mena.sh
akony 'ping 10.50.0.125 -w 5' >> mena.sh
akony 'ping 10.50.0.80 -w 5' >> mena.sh
ampandehano io ./red.sh ary tsara
Valiny tamin'i Jorge Rodriguez
Ry malala, mila mamorona script fametrahana automatique aho. Vonona ny handoa vola amin'ny asa vita tsara aho. Ireo izay liana, andefaso mailaka amiko carranzalh@gmail.com. Misaotra anao
mitsentsitra ny akoho XD izy ireo
Mamaly an'i sAry
Hdexz dia hoy izy:
Tsara maraina namana, afaka manampy ahy amin'ny zavatra ve ianao
Mila manao backup miaraka amin'ny linux an'ny orinasa aho satria azo antoka kokoa izany ka tsy tratran'ny virus izany fa tsy haiko ny manao azy ireo.
Mila mamorona script aho izay hameno ireo rakitra ary handefa azy ireo any amin'ny ftp
Tiako aloha ny manoratra amin'ny mailako
Mamaly an'i Hdexz
Misy Rekonq 0.8.1
Lazao anay hoe inona ireo rindranasa tianao indrindra